Oromo: Yeroo suuraa Minilik nu aagrsiisan Aanolee fi Calanqoo yaadanna!! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOromo: Yeroo suuraa Minilik nu aagrsiisan Aanolee fi Calanqoo yaadanna!!
Masaraan Minilik haaromee ‘Paarkii Tokkummaa’ jedhamee har’a eebbifame kun akka laallee seenaa dabre gaarii jabeeffannee kaan ammoo irraa barannuuf jedhan. Garuu wantootni keessatti agarsiifaman seenaa Itoophiyaa durii akka nama hawwatuuf ykn nama jaalachiisuuf itti yaadamee hojjatame. Yeroo waan gaarii Minilik hojjate achitti agarsiisan hammeenya isaa kan akka ‘Harma Muraa Aanolee fi Calii Calanqoo’ illee ni dhoksan. Hamaa dabre wanti isaan agarsiisan hin jiru. Sababni Itoophiyaa hamtuu turte gaarii fakkeessanii mul’isuudha yaadni isaanii.
Faayidaa isaarra miidhaa isaatu caala jedheen amana. Itoophiyaan Oromoo dabalatee saboota biyyattii cunqursaa turte. Waan gaarii ittiin Itoophiyaa durii yaadannu hin qabnu. Yeroo waan durii nutti agarsiisan madaa keenyatu tuttuqama. Yeroo suuraa Minilik nu aagrsiisan Aanolee fi Calanqoo yaadanna. Kana ofkeessaa haquu hin dandeenyu. Waan isa miidhe yaadachuun amala ilma namaati. Gaarii isinitti agarsiifna jechaa madaa dabre nu yaadachiisanii ‘tokkummaa’ jechuun wal faallessa. Kanaaf wanti kun tokkummaa ummataaa diiga. Itoophiyaa walitti fiduu osoo hin taane daran addaan fageessa.
Turistoota qofa yaadanii yoo ta’e hundeen aangoo mootummaa ummata malee turistootaa daaw’atuu miti. Yaadni akkasii hundee aangoo mootummaa gogsaa deema. Kana hubachuu dhabanii dirqiin tokkummaa jechaa ooluun tokko nama hin taasisu. “Afuuffaan madaa hin fayyisu” akkuma jedhamu dhugaadhaan onneerraa badii dabre kan ummata addaan fageesse irraa fagaatan malee ummata tokkoomsuun afaaniin jedhameef hin ta’u.
Pictorial. #UnityPark, #Ethiopia
Ethiopia: ሰበር መረጃ – ዶ/ር አብይ አህመድ ዛሬ ያቀረቡት ጥሪ | Dr Abiy Ahmed’s Speech
Hinbariine. Dimimmisa keessa jirra. Yoo laafne dukkanatti deebi’uu keenyatu mala. Yoo jabaanne ifatti baana. ~ Obbo Leencoo Lataa https://t.co/myfa3wDyLK pic.twitter.com/bjdESzLBaj
— Kichuu (@kichuu24) October 10, 2019
#etv የአንድነት ፓርክ ምረቃ ስነ ስርአት ክፍል
WAASHINGITAN, DIISII — (voaafaanoromoo)—Waajjira muummicha ministeera Abiy Ahimeditti itti gaafatamtuun damee afaan biyyootii alaa fi digitalii BiilLenee Siyyuum haaromsamuu masaraa mootummaa ilaalchisuun akka dubbatanitti projektiin kun qaama “Medemer” kan muummichi ministeeraa geggeessanii ti jedhan.